Asehoy ny fampisehoana an'i India - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat, Fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Event » Fampitana India Show
Izany fisehoan-javatra izay no lasa.
« Podcast Movement
Kat Show »
Mampifandray eto ny hoavin'ny fampitaovana teknolojia
Mivoatra amin'ny haavon'ny haingo ny teknôlôjia ary manelingelina ny zava-drehetra mihatra aminy; Tsy misy hafa ny tontolon'ny fampielezam-peo sy fialamboly. Ny habetsaky ny fandrosoana vaovao azo atao ao anatin'ity orinasa ity dia mbola marefo amin'ny ankamaroan'ny fotoana, afa-tsy fotoana iray manokana. Isan-taona, nandritra ny taona 27, ny Broadcast India Show dia lasa sehatra fifanakalozan-kevitra izay maneho amin'ny lafiny iray, ny paradigma dia miova amin'ny teknolojia infotainment manerana izao tontolo izao. Etsy andaniny, dia ahafahanao mifandray amin'ireo mpanavao sy miaina ny zava-mahagaga an-tanana.
The Fampahalalam-baovao Indiana sy momba ny indianina dia iray amin'ireo orinasam-pamokarana haingana indrindra eto amin'ny firenena. Ny sehatra dia nitombo hatramin'ny 11% ka hatramin'ny USD 20 miliara amin'ny fidiram-bola tanteraka, amin'ny taona ara-bola 2016; araka ny tatitra nataon'ny FICCI. Antenaina ny hikasika USD 35 miliara amin'ny taona ara-bola 2021. Fandefasana telefaona, fizaràna, sarimihetsika, printy, radio, dokam-barotra ary digital dia sasantsasany amin'ireo segondra izay nitarika ny fitomboana.
Miaraka amin'ny fampielezana Broadcast India Show 2018, fotoana izao hananganana ny teknolojian'ny fampitam-baovao - fampiharana haingana, mora kokoa, mahafa-po kokoa ary mahatalanjona kokoa amin'ny asa amin'ny fampitana, horonantsary, raki-peo, radio ary ny zavatra hafa rehetra izay mampiroborobo ny indostrian'ny indostainment - avy amin'ny famoronana votoaty ho an'ny fitantanana sy ny fanomezana azy. Ny orinasa sy orinasa, veteranina sy matihanina, mpamatsy ary mpanjifa, visionaries ary ireo mpiray antoka hafa manerana an'izao tontolo izao dia hivondrona mba hanatsarana ny fahafahana, hametraka fifandraisana ara-barotra ary hanamora ny fitambaran-tsakafo manerantany amin'ny ankapobeny toy ny fanao isan-taona.
Ny famoahana farany ny Broadcast India Show dia nahita 9,862 mpitsidika tsy manam-paharoa and over Marika 500 mpandray anjara avy amin'ny mihoatra Firenena 36 miara-manatona, maniry mafy hanosika haingana kokoa ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny rano. Amin'ny maha-mpitsidika na mpandray anjara iray, dia tsy isalasalana fa ny horonan-tsarimihetsika dia hanome ny mari-pahaizana vaovao momba ny toetr'andro ho anao.